इरानका वैज्ञानिक फक्रिजादेहको हत्या, कस्ले गर्यो ?Nepalpana - Nepal's Digital Online
बिहिवार, माघ १५ गते २०७७
२०७७, माघ १५ गते
इरानका वैज्ञानिक फक्रिजादेहको हत्या, कस्ले गर्यो ?
नेपालपाना मंसिर १३ २०७७
एजेन्सी। इरानका आणविक हतियार सम्बन्धी वैज्ञानिक मोहसिन फक्रिजादेहको तेहरान नजिकैको अबसर्ड शहरको सडकमा हत्या भएको छ ।
फक्रिजादेहको हत्याबारे सँसारको ध्यानाकर्षण भएको छ । हिजो उनलाई बन्दुकधारीले आक्रमण गरेपछि बडिगार्डले बचाउन खोजेपनि सकेनन् । अस्पतालमा उनी मृत घोषित भए । मोहसिनको हत्याको बदला लिने भन्दै इरानी अधिकारीहरुबाट कडा चेतावनी आइसकेको छ ।
इरानी राष्ट्रपति हसन रुहानीले इजरायललाई हत्याको आरोप लगाए । उनले मोहसिनको हत्याले आणविक कार्यक्रम सुस्त नहुने बताए । उनको अभिव्यक्तिको इजरायलले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । इरानका विदेशमन्त्री जाभद जरिफले हत्यामा इजरायको संलग्नताको प्रमाण रहेको दाबी गरेका छन् ।
६३ वर्षीय वैज्ञानिकलाई पश्चिमा देशहरुले इरानको आणविक कार्यक्रमको मुख्य व्यक्तिका रुपमा चिन्दथे । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले उनको नामै किटेर इरानको आणविक महत्वाकांक्षाका बारेमा सन् २०१८ मा बोलेका थिए । मोहसिनको हत्यालगत्तै मध्यपूर्वमा तनाव बढेको छ । इरानले यसको बदला लिने बताएबाट हिंसा बढ्नसक्ने बताइएको छ ।
जन्ती बोकेको जीप कच्ची सडकमा दुर्घटना, ४ जनाको मृत्यु
बोको हरामले गरेका हमलाबाट कम्तिमा ११० जना किसान मारिए
जेलमा कोभिड फैलिएपछि दङ्गा, छ जनाको मृत्यु
बोको हरामद्वारा ४३ जना किसानको घाँटी काटेर हत्या
मंसिर १३, २०७७ शनिवार १६:००:१६ बजे : प्रकाशित
टिग्रेको क्षेत्रीय राजधानीमा सरकारी बलको कब्जा
बेहुलीलाई १३ हजार अमेरिकी डलर जरिवाना
रूसी राष्ट्रपति पुटिन दुई कार्यकाल राष्ट्रपति हुन पाउने प्रस्ताव संवैधानिक अदालतद्वारा स्वीकृत
विश्वभर कोरोना त्रासः साउदीमा पर्यटक भिसासहित हवाईसेवा पनि बन्द
प्रचण्डको पक्षमा होला त सर्वाेच्चको फैसला ? यस्तो छ अदालतको संकेत !
२८ हजार नेपालीले कोरोना खोप लगाएपछि आयो यस्तो खबर
चर्का कुरा गर्ने ठूलै कांग्रेस नेतामाथि सर्वोच्चले लियो एक्सन!
ओली पशुपतिनाथकाे पूजामा-प्रचण्ड भैंसी पूजामा, कठै कम्युनिस्टहरु !
पद्माकुमारी अर्याल भन्छिन्- चुच्चे नक्साले ओलीलाई पदबाट हटाउने खेल भयाे
संकटमा प्रधानमन्त्री ओली, अन्तत: सर्वाेच्चले दियो यस्तो आदेश !
खोप–मित्रता: प्राथमिकतामा जनता, प्राथमिकतामा छिमेकी
ओलीले पशुपतिनाथमा पुजा गर्दा 'नाटकै हो' भन्नेहरुलाई बालुवाटारबाट आयो कडा जवाफ, प्रचण्डको भैंसी पुजा भाइरल!